Ungabhalisi uyilo lwekhasi lokufika
NgoLwesibini, Matshi 11, 2008 NgoLwesibini, Septemba 29, 2020 Douglas Karr
Ndabhaliselwa kwiphulo elinobunzima ukusuka kwinkampani enesithembiso esinyanzelayo. Ii-imeyile zazicacile kodwa zinekopi enkulu ende. Qho xa ndithatha inyathelo kwindawo yabo, bendifumana umxholo owahlukileyo osekwe kwimisebenzi yam (okanye ukungasebenzi). Namhlanje ndifumene i-imeyile ebhalwe kakuhle kodwa ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyeke umnikelo kwaye ndingabhalisi kwii-imeyile.
Nantsi indlela abaye bathi ngayo:
Yhu! Lo ngumyalezo osemva kwale, “uyeke ukudlala ukuze siye kwi-sucker elandelayo… yabona!”
Kuphela ngaphandle kwe "see ya!".
Izinto ezintathu zePhepha lakho lokuFikela lokungabhalisi:
Imirhumo esekwe kwindima -Nikezela ngesihloko esisekwe ekubhaleni endaweni yenkosi. Kungalula njengokuthi, “Uyekile ukurhuma kweli phulo le-imeyile, nazi ezinye izihloko onokuba nomdla kuzo:” ngesithembiso sokukhetha ukungena kwabanye. Usenokuzama ukubopha inkuthazo kuyo.
Izizathu zokungazikhupheli - Buza Kutheni! Kutheni beyekile ukubhalisa? Ngaba zazininzi kakhulu ii-imeyile? Ayonelanga? Andinamdla? Akukho mkhankaso we-imeyile ugqibelele, kutheni ungabuzi ukuba unokwenza ngcono njani? Enkosi ngokuthatha inxaxheba kwaye uxolise ukuba bakhethe isizathu esithi, "uyanya!".
Izongezelelo -Sebenzisa lonke elo phepha learhente yokuthenga izindlu nomhlaba ezinye izibonelelo! Musa ukuphosa iphepha elikhulu elimhlophe elingenanto kulo mntu! Babekhona benomdla kunye nenjongo ngexesha elinye okanye elinye (xa babhalisile). Kutheni ungabonisi iimveliso zakho zamva nje, iinkonzo, iphepha elimhlophe, njl. Kuthiwani malunga neeprofayili zentlalo eziza kulandela?
Xa ndisebenzela i-ExactTarget, ndisebenzise lo mzekelo wenkqubo ngokubanzi (kwaye ukuthengisa kuyikopi kunye noyilo). Eli phepha linombulelo, isikhubekiso malunga ne-ExactTarget, ikhonkco leDemo elenzelwe umntu, kunye nokunxibelelana nayo yonke indawo yabo!
Ngamanye amaxesha intengiso iqala xa umthengi okanye ithemba liphuma emnyango. Unethuba lokwenza umbono ongapheliyo, ungaphoswa liphepha elingenanto!
tags: ngqomaster zikhupheungabhalisi iphepha lokufikaungabhalisi iphepha
Into Engendawo Ngale ndlela Iza…
Mar 11, 2008 ngo 1:52 PM
Ndiyazibuza ukuba ukuguga kwam (kodwa unakho kwiwebhu) ootatomkhulu banokutolika njani "isusiwe" (becinga ukuba banokufumanisa ukuba bangazikhupha njani na into. Isusiwe kwi-Intanethi? Isusiwe kuqhagamshelo lwabo lwesantya esiphezulu? Ususiwe ekhayeni labo? Ndinokuba nomfanekiso ngqondweni wezicelo zabo zokufuna uncedo….
Mar 11, 2008 ngo 5:59 PM
Ndicinga ukuba kungcono kunokuthi 'kucinywe' okanye 'kupheliswe'. 🙂
Mar 11, 2008 ngo 4:50 PM
Douglas, eli licebiso elihle. Ukuzikhupha kwam ekubhaliseni akubi kangako ngandlela zonke, kodwa akuthandeki nako. Ndiyabuza ukuba kutheni bekhuphe ubhaliso kwaye ndiyababulela ngokufunda.
Kodwa ndicinga ukuba luluvo olulungileyo ukuphinda undwendwele iphepha ukuze ubone oko bakubonayo kwaye uqiniseke ukuba ngumyalezo ofuna ukubashiya nawo.
Mar 11, 2008 ngo 8:23 PM
Ndicinga ukuba "iphepha elihle lokuvalelisa" lilungile. Kodwa ndine-hunch ayinamsebenzi ngaphandle kokuba ukhumbuza umsebenzisi malunga nolwazi abangabhalisi kulo.
Ngokwesiqhelo, ukuba umntu uzikhathaza ngokubetha ikhonkco lokungabhalisi, sisivumelwano senziweyo.
Ukuya kuthi ga kwincoko yababini ebuza ukuba kutheni umsebenzisi engabhalisi, ndingathanda ukubona izibalo ezibambekayo malunga nokuba umsebenzisi ugcwalisa ifomu kunye nento abayithethayo.
Ngokwam, xa ibhokisi ethi “Kutheni ushiya” okanye iphepha lilayisha emva kokuba ndiqinisekise iminqweno yam … Andilindi nokuba iphepha lilayishe phambi kokuba ndibethe iqhosha lokuvala lesikhangeli.
Mar 11, 2008 ngo 8:50 PM
Ndiyavuma ukuba ukuzikhupha kubhaliso mhlawumbi sisivumelwano esenziweyo-inqaku lam kukuba ungaqhubeka nokuzama ukwakha ubudlelwane nomntu kunye nokubabonelela ngezinye iimveliso okanye iinkonzo.
Ngapha koko, ndicinga ukuba indlela entle yokuphatha iphepha elinje kukubeka iliso kwiphakheji yakho ye-analytics kwaye ubone ukuba bangaphi abantu abasebenzisanayo EMVA kokungabhalisi!